iPhone Contacts Vanoti 'Zvimwe'? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
foni yangu inongodedera pasina chikonzero
iphone 7 haikwanise kutarisa kuti yagadziriswa
nei charger yangu ichinonoka
iphone 6s yakanamatira muapuro logo
macbook pro system yekuchengetedza yakakwira
IPhone Contacts Vanoti 'Zvimwe'? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Iwe uchangobva kugamuchira rugwaro, asi chimwe chinhu hachiratidzike chaizvo. Inoti 'Zvimwe' padyo nezita rekutaurirana! Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti nei vako iPhone vokukurukura vanoti 'Pamwe' uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka .
Sei Ichiti 'Pamwe' Inotevera Kune Yangu iPhone Maficha?
Kazhinji yenguva, yako iPhone vokukurukura vanoti 'Pamwe' nekuti yako iPhone ine zvinehungwaru yakabatana zita kubva kune yapfuura email kana meseji kune mumwe munhu ari kuedza kutaura newe izvozvi. Zvakachengeteka kutaura, yako iPhone yakangwara kwazvo - inogona kuchengetedza ruzivo kubva kuemail kana mameseji iwe aunogamuchira uye kuibatanidza kune imwe meseji mune ramangwana zuva.
Semuenzaniso, unogona kunge wakagamuchira meseji ichiti, 'Hei, uyu ndiMark uye ndakafara chaizvo kusangana newe rimwe zuva.' Zvakanaka, kana Maka achikunyorera zvakare zuva rinotevera, yako iPhone ingangoti, 'Pamwe: Maka' pane nhamba yefoni.
Matanho pazasi achabatsira kudzivirira 'Pamwe' kubva kuratidza kumusoro kwezita remazita ako!
Dzima Siri Zvirongwa Pane Yako iPhone
Nguva yakawanda, iwe uchaona iyo 'Pamwe' padhuze nezita rekutaurirana mune ziviso pane yako iPhone yekuvhara skrini. Izvi imhaka yekuti Siri Ongororo pane Lock Screen yakavhurwa. Kana iwe uchida kumisa 'Zvichida' kubva kuoneka padyo nezita rekutaurirana pane yako iPhone kukiya skrini, enda ku Zvirongwa -> Siri uye dzima switch iripedyo ne Mazano pane Lock Screen .
foni inofunga kuti mahedhifoni akaiswa mu iphone
Saina Uchipinda & Kunze KweICloud
Kana shamwari dzako dzakabatana neakaundi yako yeICloud, kusaina uye kudzoka muaccount yako yeICloud kunogona kugadzirisa dambudziko neako iPhone vokukurukura uchiti 'Zvimwe'.
Kuti usayine kubuda muICloud, vhura Zvirongwa uye tora pazita rako kumusoro kwechiso. Wobva waipuruzira pasi pese wobva wadzvanya Buda . Mushure mekubaya Sign Out, uchafanirwa kuisa yako Apple ID password kuti udzime Tsvaga Yangu iPhone, iyo isingagone kusiiwa paunobuda paApple ID yako.
iphone yangu skrini yakasviba asi ichiri kushanda
Kuti upinde zvakare mukati, vhura Zvirongwa uye tap Saina ku iPhone yako .
Gadzira Mutsva Wekubatana Kubva kuMessage Inoti 'Zvimwe'
Kana iwe ukatambira meseji kubva kuzita rinoti 'Pamwe', unogona kugadzirisa nyaya nekuwedzera iyo nhamba seyehukama. Kuti uwedzere kuonana zvakananga kubva mukutaura muapp Messages, tinya iyo nhamba iri pamusoro pechiso. Wobva wadzvanya bhatani reruzivo - rinoratidzika sedenderedzwa riine 'i' pakati payo.
Tevere, tinya pane iyo nhamba yepamusoro pechidzitiro zvakare. Pakupedzisira, tapira Gadzira Nyowani Yekubatana ndokutaipa ruzivo rwemunhu. Paunenge wapedza, tapira Zvaitwa mukona yekumusoro-kurudyi kona yekona.
Iyi nzira yekuwedzera kusangana kubva kuMessage hurukuro ndeye maPhones anomhanya iOS 12 kana nyowani . Kana yako iPhone iri kushanda iOS 11 kana yapfuura , bhatani reruzivo richaonekwa mukona yekumusoro-ruoko kona yekutaurirana.
maitiro ekuisa foni yako mu dfu modhi
Delete Iyo Yekubatana & Kumisikidza Iyo Zvakare
Dzimwe nguva kusangana kucharamba kuchingoti 'Zvimwe' kunyangwe iwe wawedzera iko kuonana. Izvi zvinowanzo kuve zvichinzi kune diki glitch kana syncing nyaya, iyo iwe yaunogona kugadzirisa nekubvisa iyo yekuonana uye nekuiwedzera ivo zvakare.
Kuti ubvise munhu waunobata pane yako iPhone, vhura iyo App yefoni uye tinya pane Yekutaurirana tebhu pazasi pechiso. Tevere, tsvaga iyo yekuonana iwe yaungade kudzima uye tora pairi.
zvinorevei kana uchirota pamusoro pemakonzo
Tevere, tinya Hora mukona yekumusoro-kurudyi kona yekona. Wobva wadzvanya nzira yese pasi wobva wadzvanya Delete Contact .
Gadziridza iOS Pane Yako iPhone
Ini ndaimbomhanyira mune iyi nyaya apo yangu iPhone yanga ichimhanya iOS 11. Kubvira pakuvandudza kune iOS 12, dambudziko iri rakapera zvachose. Handisi kureva kuti kugadzirisa yako iPhone kuchagadzirisa zvakakwana dambudziko rako, asi zvakakodzera kuti uyedze.
Kuti uvandudze iPhone yako, enda ku Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridzo . Kana inogadziridza iripo, pombi Dhawunirodha & Isa . Tarisa uone yedu imwe chinyorwa kana ukamhanyisa mune chero nyaya dzekugadzirisa yako iPhone .
inogona kudiridza yakanganisika iphones inogona kugadziriswa
Wakave Uchangobva Kudzima An App Iyo Yaive Nekusvikira Kune Vaunofambidzana?
Mamwe maapplication akaita seSkype, Uber, uye Pocket anokumbira mvumo yekuwana vako vokukurukura. Kuita izvi kunotendera iwo maapplication kuti asanganise zviri nyore shamwari dzako kuapp, iyo inogona kunyanya kuve nyore kune eruzhinji midhiya maapplication.
Nekudaro, kana iwe ukadzima Anwendung ine mvumo yekuwana vako vokutaurirana, zvinogona kukonzera yako iPhone vatauri kuti iti 'Zvimwe'. Mumamiriro ezvinhu aya, unogona kudzoreredza iyo app, kana kuenda kuburikidza neako mahukama uye woadzokorora iwo pamurume. Kuti uwane mhedzisiro yepamusoro, gadziridza ako ekutaurirana nemaoko!
Ndinovimba chinyorwa ichi chakakubatsira kuti unzwisise kuti nei mafoni ako epa iPhone achiti 'Zvimwe'. Kana iwe ukaratidza se 'Zvimwe' pane imwe shamwari yako maPhones, ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa navo! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone, inzwa wakasununguka kundisiira mhinduro pasi apa.